Adeegga is -hagaajinta ee OEM OEM ODM Soo -saarka iyo Warshadda | KORINTA-Elec
Dulmarka guud ee isku xirnaanta qaab dhismeedka birta
Bolt -ku -xirnaanta qaab -dhismeedka birta waa hab isku -xir oo isku xira in ka badan laba qaybood oo ah qaab -dhismeed bir ah ama qaybo hal boolal ah. Xiriirinta Bolt waa habka ugu fudud ee isku xirka qeybta hore iyo rakibidda qaab dhismeedka.
Xiriirka la xiray waa kan ugu horreeya ee loo adeegsado rakibidda qaab -dhismeedka birta. Dabayaaqadii 1930 -meeyadii, isku -xidhka boodhka ayaa si tartiib -tartiib ah loogu beddelay isku -xidhka rivet, kaas oo loo adeegsaday oo keliya cabbir ku -hagaajin ku -meel -gaar ah oo ka mid ah isu -geynta qaybaha. Habka isku xirka bolt -ka xoogga sare ayaa soo muuqday 1950 -meeyadii. Muraayadaha xoogga sare waxaa laga sameeyaa birta kaarboonka dhexdhexaadka ah ama birta kaarboon dhexdhexaadka ah, xooggooduna wuxuu 2 ~ 3 jeer ka sarreeyaa kuwa booladaha caadiga ah. Isku xirnaanta bool xoog leh ayaa leh faa'iidooyinka dhismaha habboon, badbaadada iyo isku halaynta. Waxaa lagu dabaqay soo saarista iyo rakibidda dhismayaasha birta ee qaar ka mid ah dhirta birta laga soo bilaabo 1960 -kii.
Tilmaamaha Bolt ee sida caadiga ah loo adeegsado dhismayaasha birta waxaa ka mid ah M12, M16, M20, M24 iyo M30. M waa astaanta boodhka lambarkuna waa dhexroor magac u yaal ah.
Boolalku waxay u qaybsan yihiin 10 darajo marka loo eego darajooyinka waxqabadka: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9 iyo 12.9. Muraayadaha ka sarreeya fasalka 8.8 waxaa laga sameeyey bir-kaarboon kaarboon hooseeya ama birta kaarboonka dhexdhexaadka ah waxaana guud ahaan loogu yeeraa boolal xoog leh ka dib daaweynta kulaylka (bakhtiinta iyo kulaylka), iyo boolal ka hooseeya fasalka 8.8 (marka laga reebo fasalka 8.8, boolal caadi ah oo la safeeyey ayaa sidoo kale ku jira fasalka 8.8) guud ahaan waxaa loogu yeeraa boolal caadi ah. Jadwalka soo socdaa wuxuu muujinayaa darajada waxqabadka iyo sifooyinka farsamo ee boolal.
Hore: Adeegga taageeraya nooc kasta oo xirayaasha
Xiga: Dhammaan taxanaha habaynta fur
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Sheet Birta Stamping Products, Aluminium CNC Qaybo Machined, Guga Saxanka, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Dhimashada Magnesium, Boolal, Dhammaan Alaabta